mairie-antananarivo – Fihaonan’ny Lefitra faharoan’ny ben’ny Tanàna tamin’ny mpanao gazety
Fihaonan’ny Lefitra faharoan’ny ben’ny Tanàna tamin’ny mpanao gazety
auteur 14 novambra 2017 Commentaires fermés
Nanazava ny Lefitra Faharoa ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Andriamorasata Julien mikasika ny fanaratsiana nataon’ny mpanolotsaina ny tanàna, Lalatiana Ravololomanana, ny fitantanana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Nilaza ny lefitra faharoan’ny Ben’ny Tanàna fa fankahalana tanteraka ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tsotra izao fotsiny ny an’i Lalatiana Ravololomanana, ka anisan’izany ny tsy nahalany azy ho Ben’ny Tanàna. Izay efa nirotsaka ben’ny tanàna hoy izy ka tsy lany dia tsy tokony hatao mpanolotsaina intsony satria miteraka olana izany, lasa vato misakana ny fampandrosoana tian’ny Ben’ny tanàna hatao ireny kandidà Ben’ny tanàna tsy lany lasa mpanolotsaina ireny. Tsy eto Antananarivo Renivohitra ihany no misy izany fa hatrany amin’ny faritra dia ahitana olana avokoa. Tsy zakany ihany koa ny fahazoan’ny Ben’ny Tanàna ny Amboara tamin’ny « PACT DE MILAN », loka Iraisam-pirenena momba ny fambolena an-tanàn-dehibe, izay ezaka nataon’ny Ben’ny Tanàna Lalao RAVALOMANANA sy ny Kaominina manontolo, neken’ny iraisam-pirenena ny fandaharan’asany tamin’io resaka fambolena an-tanàn-dehibe io.
Ny fahatelo dia nisy Zanany Talen’ny « Affaire Juridique » tato amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra tamin’ny andron’ny PDS Ny Hasina Andriamanjato , izay nakisaka nohon’ny antony arak’asa satria tsy nisy nandeha tany amin’ny “Préfet de police” ny “acte sy ny délibération” rehetra tato amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra nefa anjaran’io sampandraharaha io no manao izany ary afaka toriana izany satria tsy ara-dalàna .
Ny farany dia ny OMAVET nanaovan’ny Mpanolotsaina Marc Ravalomanana sy ny Ben’ny Tanàna, ary ireo solontenan’ny mpanao taxi fidinana ifotony. Ny mpanolotsaina ny Kaominina Antananarivo Renivohitra anefa no nandany amin’ny fanovana ny « contre visite » ho eny amin’ny OMAVET . Noho izany dia nisy ny fanaratsiana nataony fa ataon’ny mpanolotsaina manokana, Marc RAVALOMANANA fitadiavam-bola hanaovana « Propagady » ny fampiasana ny OMAVET. Tena fanalam-baraka tanteraka izany sady tsy misy taratasy porofo mazava mikasika izany ; afaka mitory azy Atoa Marc Ravalomanana ary mampigadra azy ny fanalam-baraka olona toy izany. Nefa na izany aza dia miantso fiaraha-miasa aminy hatrany ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana amin’ny maha-mpanolotsainan’ny tanànan’Antananarivo azy.
Raha ny Easy Park indray hoy ny Lefitrin’ny faharoan’ny Ben’ny Tanàna dia tsara tantana ny vola azo avy ao amin’ny Easy Park, ary tamin’ny andron’ny PDS Ny Hasina no nanaovana ny “déliberation” azy io dia narahin’ny taty aoriana . Tsara ho marihana fa nisy fotoana tsy noraisin’ny Trésor ny vola tokony hiditra amin’ny Kaominina Antananarivo, avy any amin’ny Easy Park nandritra ny herintaona latsaka satria mbola tsy feno ny fepetra. Tao anatin’izany anefa nisy ny fifanarahana niaraka tamin’ny Easy Park nakana avance satria sahirana ara-bola ny kaominina ary vola tokony hiasa ao amin’ny Kaominina izany .
Tsy nety nandray « bon de commande » avy any amin’ny kaominina ireo Orinasa miara- miasa fa lelavola no tadiaviny; dia tsy maintsy vola avy any amin’ny Easy Park no nangatahana. Teo ihany koa ny fangalana vola nanaovana fampiofanana ireo “percepteur” avy ato amin’ny Kaominina mba ho tsara tantana ny fidiram-bola….. Manana trosa 40 milliards d’ariary navelan’ny mpitondra teo aloha ny kaominina ka tsy maintsy mitady hevitra hatrany hampandehanana ny asa ao anatin’ny fomba ara-dalàna hatrany.
Nanambara ihany koa ny Lefitra faharoan’ny Ben’ny Tanàna fa maro ireo mpiasa nampidirina tamin’ny fitondran’ireo PDS teo aloha izay tsy misy sivana ary ny 200 mahery tamin’ireo dia diploma hosoka avokoa ary amin’izao fotoana izao dia 3.200 sisa ny mpiasa noho ny fanadiovana sy ny fanatsaram-pitantanana. Mbola tsy nisy Karama tsy voalon’ny kaominina hatramin’izao fa miezaka hatrany ny Ben’ny Tanàna ary anisan’izany ezaka izany ny fifandraisana amin’ireo firenena any ivelany. Namafisiny ihany koa fa tsy maintsy handoa ny « prime » an’ny mpiasa ny kaominina amin’ny farany taona, noho ny ezaka atao amin’ny fahatsaram-pitantanana avokoa izany.
Noho izany dia mangataka ny BIANCO sy ny IGE ny kaominina Antananarivo Renivohitra mba ho tonga hanaramaso izany fitantanana izany satria mangarahara tanteraka ny fitantanana ato amin’ny CUA eo amin’ny resaka vola hoy izy. Ary amin’ny taona ho avy dia hametraka « MOBILE Banking » ny CUA, dia ny fandoavana ny hetra sy ny maro hafa,… amin’ny alalan’ny Mvola, na Orange Money na Airtel Money,…